BBC Somali - Hay'adeed - Wararkaaga iyo Sawiradaada
Wararkaaga iyo Sawiradaada
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 7 Novermber, 2011, 15:43 GMT 18:43 SGA
Hadii aad sheeko hayso, sawirro ama qodob dhagaysi ah ama video ah, oo aad soo qaaday, oo laga yaabo in aan danaynayno, waxaad ku soo diri kartaa bogga BBCSomali adigoo isticmaalaya form-ka hoose.
Waxa aad noo soo gudbinayso waxaa dhici karta in ay quseeyaan dhacdo deegaanka ah ama laga yaabo in aad sharaxaad ka bixin karto war ka dhacaya dalkaaga.
Ha iloobin in aad ku soo darto magacaaga, cinwaanka emailkaaga iyo faahfaahin ku saabsan sawirka, dhagaysiga ama video aad soo dirayso. Waa in aad sidoo kale ku soo dartaa telefoonkaaga hadii aan u baahanno in aan kula soo xiriirno si aan faahfaahin dheeraad ah kaaga helno.
Marka aad qaadayso sawirro ama filimaan fadlan qatar ha galin naftaada ama cid kale, meelaha qatarta ka jirto qaad tallaabooyinka lagama maarmaanka ah hana ku xadgudbin shuruuc.
Dhag sii Fadlan aqri haikan si aad u hesho shuruudaha dhinaceena ama dhinacaaga
Marka aad soo dirto qodob, waxaa aqbashay Dhag sii Shuruudaheena (in English)
Hadii aad la kulanto wax dhibaato ah fadlan email ku soo dir somali@bbc.co.uk
Waxaad kaloo email noogu soo diri kartaa sawiradaada iyo video ilawadaag@bbc.co.uk
* Muujinaya qaybaha qasabka ah
UGC upload: * Magacaaga: * Cinwaanka emailka: Telefoonka lagaa helayo: * Mowduuca: * Erayo muhiim ah (Fadlan geli erayada muhiimka ah, oo u dhaxaysi hakad)
Micnaha: (Ugu badnaan 500 eray)
Culayska ugu badan ee qodob: 200MB
Nooca File: jpg, gif, png
Waxyaabaha video u baahan yahay:
Nooca File: avi, mov, wmv, mp4, mpg, flv, 3gp, wav, mp3, wma
Ku dar Fayl kale